Izindaba - Ebhekene nesidingo esikhulu sabantu abayizigidi ezingama-800 eYurophu!
Isivivinyo se-antigen senkampani yaseChina sizuze i- "Grand Slam" yamazwe ayi-15 ahlanganisa iGermany, iFrance, i-Italy nePortugal ngesinyathelo esisodwa!
Njengamanje, ngenxa yokusabalala kwamagciwane e-mutant nezinye izinto, ubhadane lwe-COIVD-19 emazweni amaningi ase-Europe luye lwanda. Imininingwane yobhadane ekhishwe yi-WHO European Office ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ikhombisa ukuthi ubhadane lwaseYurophu selukhombise izimpawu ezisobala zokuwohloka emasontweni amathathu alandelanayo.
Ngaphansi kwethonya lomqedazwe, iYurophu, enabantu ababalelwa ezigidini ezingama-800, ifake phambili isidingo esikhulu semikhiqizo yokuthola i-antigen ye-COVID-19. Ngoba ukutholwa kwe-antigen kunomkhawulo othile wobuchwepheshe, imikhiqizo nabakhiqizi bahlanganise okuhle nokubi. Ukuphendula umkhawulo ophansi we-CE kanye nokulula kwesimemezelo, iminyango yezempilo yase-Europe isungule uhlelo lukazwelonke lwezempilo "olumhlophe" ngale ndlela, futhi kuphela abakhiqizi nemikhiqizo efakwe ku "mhlophe" abangavunyelwa ukwenza ukuthengisa ezweni.
Ukuphendula le mfuneko, abakhiqizi baseChina balwela ngenkuthalo ukufakwa "ohlwini olumhlophe" lwamazwe aseYurophu. Phakathi kwabo, iNew Gene (Hangzhou) Bioengineering Co, Ltd. (NEWGENE Bioengineering) isivele yaqhamuka yangena kuwo wonke amazwe aseYurophu njengamanje ane "whitelist" futhi yawina i-European new crown antigen detit whitelist grand slam! Lawa mazwe afaka phakathi iJalimane, iFrance, i-Italy, iSwitzerland, iPortugal, iCzech Republic, iBelgium, iHungary, iGrisi, iMoldova, njll. Phakathi kwawo, imikhiqizo ye-antigen ye-NEWGENE iphumelele ngempumelelo ukuhlolwa komtholampilo waseJalimane ne-Swiss BAG test, ezimbili izivivinyo eziqukethe igolide kakhulu eYurophu.
IGene entsha idlule ngempumelelo ukuhlolwa kwe-PEI yaseJalimane
IGene entsha idlule ngempumelelo ukuhlolwa kweSwitzerland BAG
Ukungena "kuhlu olumhlophe" lwamazwe ahlukahlukene nokuphasa isivivinyo somtholampilo wasendaweni kuyizinto ezidingekayo zokufaka isicelo sokuzihlola ekhaya i-antigen. Ngokukhululeka okugcwele kwezicelo zeziqu zokuzihlola ekhaya emazweni e-EU, imikhiqizo yokuthola i-COVID-19 ye-NEWGENE izoba sesikhundleni esibalulekile emakethe yase-Europe.
Kuyaphawuleka ukuthi ngaphezu kwemakethe yase-Europe, i-NEWGENE ibuye yahlela ekuqaleni ezimakethe zaseNingizimu Melika nezase-Afrika futhi ithole ukugunyazwa okuphuthumayo (i-EUA) nezimvume zokungenisa ezivela emazweni anjengePeru, i-Argentina, i-Ecuador, iKenya kanye neZimbabwe . Phakathi kwazo, i-NEWGENE njengamanje iwukuphela komkhiqizo wokutholwa kwe-antigen we-Chinese brand COVID-19 owaziwa uMnyango Wezempilo waseKenya.
Njengamanje, isimo sokuvimbela nokulawula ubhadane lwangaphandle sisabucayi. Ezinkampanini zamaShayina zebhayoloji, ngenkathi zizinikele ekusebenziseni ubuchwepheshe ukuxhasa ukulwa nalolu bhubhane, kuphinde kwaletha nethuba lokwakha ithonya laphesheya lemikhiqizo yaseChina.
I-NEWGENE yinkampani enobuchwepheshe obuphezulu etshalwe ngokuhlanganyela futhi yasungulwa ngochwepheshe be-biotech kule mboni. It is ikakhulukazi benza ucwaningo nentuthuko, ukukhiqizwa kanye nokuthengiswa kwemikhiqizo yemvelo. Izibophezele ekwakheni ngezinto zemvelo ezifana nama-antigen kanye nama-antibodies, kuya kuma-reagents wokuxilonga we-in vitro nemishini ehlobene nayo, nokuxilongwa okusizwa ngobuhlakani bokufakelwa. Ukuhlelwa okuhlelekile kwayo yonke imboni yezimboni. Le nkampani iqoqe izinsiza ezijulile zokubambisana ezinhlelweni zezokwelapha zasekhaya nezangaphandle kanye nezindlela zokubambisana zesikhathi eside nezizinzile emazweni amaningi ase-Europe, e-Southeast Asia, eMiddle East, e-Afrika naseNingizimu Melika. Njengamanje, imikhiqizo yokuhlola ka-NEWGENE ye-COVID-19 ithunyelwe emazweni angaphezu kwama-50 emhlabeni jikelele. Ngikholwa ukuthi imikhiqizo eminingi yamaShayina efana ne-NEW GENE izodlala indima ebalulekile ekusizeni umhlaba ukuthi ulwe nobhadane lolu!
IsiJalimane Ukubhaliswa kwabamhlophe kweBfArM
I-URL yombuzo: https://antigentest.bfarm.de/ords/f?p=101-1900: 1400300666539:::::&tz=8:00
IsiFulentshi ukubhaliswa kwabagunyaziwe
I-URL yombuzo: https://covid-19.sante.gouv.fr/tests
I-URL yombuzo: https://www.finddx.org/test-directory/?_manufacturer=new-gene-hangzhou-bioengineering-co-ltd&_region=asia&_country=china&_self_testingself_collection=no&_assay_target=antigen
I-Italy ukubhaliswa kwabagunyaziwe
I-URL yombuzo: http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA
(bhala iNew Gene eDenominazione fabbricante)
IsiSwitzerland ukubhaliswa kwabagunyaziwe
I-URL yombuzo: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/medizin-und-forschung/heilmittel/covid-testung.html
EPortugal ukubhaliswa kwabagunyaziwe
IsiCzech ukubhaliswa kwabagunyaziwe
e-Belgian ukubhaliswa kwabagunyaziwe
IGrisi ukubhaliswa kwabagunyaziwe
IsiHungary ukubhaliswa kwabagunyaziwe
I-Argentina Ukungenisa ilayisense
I-Peru Ukugunyazwa Kwezimo Eziphuthumayo (i-EUA)
IKenya Ukugunyazwa Kwezimo Eziphuthumayo (i-EUA)
Cha, 1700, North Tianfu Avenue, Chengdu High-tech Zone, eSifundazweni saseSichuan, eChina